Olee otú imelite ihe gbanwetụrụ Recovery na ya ọhụrụ version | Gam akporosis
Otu esi emelite ihe gbanwetụrụ gbanwere na ụdị ya kachasị ọhụrụ
Anyị amaliteworị ịkọwa otu esi emelite ụfọdụ njedebe gam akporo na ụdị ọhụrụ nke gam akporo 5.0 Lollipop na-ezighi ezi na ihe mbu Roms Alpha si Cyanogenmod 12. Nke a bụ ihe gbasara LG G2 ma ọ bụ ikpe nke Samsung Galaxy S4 GT-I9505 mba nlereanya.
N'ihe banyere LG G2, nke bụ ọnụ nke m nwere n'onwe m, m ga-agwa gị nke ahụ Rom dị egwu ma na-agba ọsọ n'enweghị ntụpọ ọ bụla, ma ọ dịkarịa ala ihe anyị nwere ike iwere dị ka ihe dị mkpa. N'ihe banyere Samsung Galaxy S4, ihe ka ga-egbu maramara, ọ bụ ezie na eziokwu bụ na Android Lollipop Rom dị ịtụnanya na nke abụọ. Taa post, m bu n'obi na-eduzi gị site na Gbanwetụrụ Iweghachite melite usoro, usoro ma obu ihe di nkpa choro maka nchapu nke ndia Ndị nne na nna Cyanogenmod 12 bụrụ ihe ịga nke ọma na ihe ahụ na-arụ ọrụ dịka ọ ga-arụ ọrụ.
para melite gbanwetụrụ Recovery na ya kacha ọhụrụ mbipute dị maka ọnụ anyị, ọ dị mfe dịka ịga na ibe weebụ nke ọrụ gị, ma TWRP, Philz o CWM. Budata faịlụ abịakọrọ na ZIP, detuo ya na ebe nchekwa dị n'ime gam akporo anyị, bidogharịa na mgbake ochie na gbanye ya na-enweghị ime ụdị Wipe ọ bụla. Mgbe ahụ, ozugbo akpalitere, anyị ga-amalitegharịa ọnụ, site na nhọrọ Reboot, na ọnọdụ Rụgharịa n'ime Ọnọdụ Iweghachite.
1 Kedu ka m ga-esi nweta ụdị TWRP kacha ọhụrụ?
2 Kedu ka m ga-esi nweta ụdị kacha ọhụrụ nke Iweghachite Philz Touch?
3 Kedu ka m ga-esi nweta ụdị CWM kachasị ọhụrụ dị?
4 Olee otú m melite m Iweghachite ya ọhụrụ version?
Kedu ka m ga-esi nweta ụdị TWRP kacha ọhụrụ?
La mbipute kachasị ọhụrụ nke TWRP Iweghachite anyị nwere ike ibudata ya na ibe weebụ a site na ịpị njikọ a. Mgbe ahụ ihe niile ị ga - eme bụ pịa na nhọrọ ahụ Nweta TWRP Maka Ngwaọrụ gị na idetu-ala dee ihe nlele nke ọnụ gị:
Kedu ka m ga-esi nweta ụdị kacha ọhụrụ nke Iweghachite Philz Touch?
N'ihe banyere Philz Touch Iweghachite, ọ dị obere karịa mgbagwoju anya ebe ọ na-enweghị igwe nyocha ọfụma dị ka nke dị na peeji TWRP. Ya mere iji nweta ọhụrụ mbipute nke Recovery Philz Touch anyị ga-elerịrị anya n'ụdị niile dị na otu njikọ a.
Kedu ka m ga-esi nweta ụdị CWM kachasị ọhụrụ dị?
Iji nweta nke kacha ọhụrụ emelitere nke Clockworkmod Iweghachite, anyị ga-eji ụgwọ na-eduga na ibe weebụ a ma họrọ ya na mbara ndepụta dakọtara ọnụ.
Olee otú m melite m Iweghachite ya ọhụrụ version?
para melite gbanwetụrụ Iweghachite na nke kachasị ọhụrụ, ihe ọ bụla ọ bụ, anyị ga-eso usoro ndị a dị mfe site na ochie gbanwetụrụ Iweghachite:
Anyị na-idetuo zipụ ebudatara na ebe nchekwa dị n'ime nke ọnụ iji melite.
Anyị na-agbanyeghachi na ọnọdụ Iweghachite.
Site na nhọrọ wụnye anyị na-ahọrọ zipu ebudatara na anyị na-agbanye ya na-enweghị nhichapụ ọ bụla.
Anyị na-aga nhọrọ reboot ma ọ bụ nhọrọ Advanced, dabere na anyị gbanwetụrụ Mgbake, na anyị họrọ nhọrọ Rụgharịa n'ime Ọnọdụ Iweghachite.
Mgbe a malitegharịrị ọnụ ya, ọ ga-abanye na Iweghachite ọzọ ma anyị ga-elele dị ka anyị na-ama nwere ọhụrụ version nke ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Iweghachite gam akporo » Otu esi emelite ihe gbanwetụrụ gbanwere na ụdị ya kachasị ọhụrụ
Kedu rom (ma ọ bụ ụdị ngwaahịa) nke ị chere kacha mma maka lg g2?
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ezigbo Stock flash kdz ikpeazụ nke m chere bụ europe emeghe ma wee gbanye ya na voila.
Aga m akọwa otu esi eme ya na Iweghachite na zip kdz.
Ngwa, daalụ maka azịza gị
Ihe ọzọ, ị na-ahọrọ ngwaahịa kdz rom ma ọ bụ omenala rom (karịa ihe ọ bụla m nwere mmasị maka nnwere onwe)?
Ugbu a ana m arapara na Evomagix Android 5.0 aosp ROM.
Ọ bụrụ na m ga-aga maka ngwaahịa dabeere na ROM ọ ga-abụrịrị Cloudy G3.
Na ndepụta iji budata twrp apụtaghị na lg g2. Kedu otu m ga-ebudata? Daalụ
Enweghị m ike ịchọta mgbake TWRP maka LG G2, na Nweta TWRP Maka Ngwaọrụ gị, ọ pụtaghị. Ọ nwere onye nwere ZIP ebudatara, ma ọ bụ njikọ iji budata ya? Daalụ nke ukwuu n'ọdịnihu.
Otu ihe ahụ na-eme m, mba d802 apụtaghị
Zaghachi CARLOS BARROSO
Will ga - ahụ ya site na itinye LG kacha mma G2
ajuju, kedu ka m ga esi gbanwee philz touch ka twrp? nwee ekele
Ndewo, mgbe m na-emelite mgbake ahụ, m na-eme ya dịka ekwuru ma malitegharia na mgbe m chọrọ ịbanye na mgbake ọ dị ka ọ ga-apụ n'anya, kedu ka m ga-esi tinye ya ọzọ, ugbu a enwere m gam akporo 5.0.1? Biko nyere aka….
TWRP Wụnye (Na-achọ TWRP 2.8.4 ma ọ bụ karịa ugbua arụnyere):
Download ọhụrụ TWRP oyiyi faịlụ (.img) si download njikọ na buut TWRP. Gaa tinye ma chọta wee họrọ bọtịnụ Images…. Gaa na onyonyo ibudatara wee họrọ ya.
Jiri thiszọ a …….
Họrọ mgbake ma swipe ka flash.dd Wụnye Usoro (Na-achọ Mgbọrọgwụ):
Budata faịlụ onyonyo kachasị ọhụrụ (.img) site na njikọ njikọ dị n'elu. Debe ya na mgbọrọgwụ nke folda gị / sdcard wee nyegharịa ya twrp.img. Gbaa iwu ndị a site na adb shell ma ọ bụ ngwa emulator ọnụ:
dd ma ọ bụrụ = / sdcard / twrp.img nke = / dev / ngọngọ / ikpo okwu / msm_sdcc.1 / by-name / recovery
Na peeji TWRP ọ dị lg g2 mana amaghị m ụdị nke a ga-ebudata maka D805 m, biko nyere aka. Daalụ
Zaghachi Felipe Escala M
Ndewo, Achọrọ m imelite cwm mgbake nke Samsung galaxy s2 i9100 m wee hụ na ụdị kachasị ọhụrụ bụ 4.0.1.5.
M lelee nke m rụnyere ma ọ bụ v 5.0.2.7. Onwere onye kowara m ya?
mmelite ndị a dakọtara na ekwentị ọ bụla?
Zaghachi jisus roa
nyere m aka inwe galaxy s4 na nke a ka m mere nhicha nke sistemụ ma ugbu a, mgbe m gbanye ya, ọ na - apụta na na galaxy logo na ọ naghị agbago, achọrọ m enyemaka gị iji wụnye gam akporo nwere kitkat. 4.4.2, ụyọkọ kpakpando m bụ Sprint s4 L720.
Zaghachi alberto rosario
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na anaghị m agbanye reboot, gịnị kpatara na anaghị m eme ya wee nweta ihuenyo ojii ... kedu ihe m ga - eme n'okwu a? Enwerem lg g2
M wụnyere cyanogenmod dị ka ị kọwara na ibe gị, na m zuk z1 iji dozie WiFi ahụ. Nsogbu a apụla n'anya mana ọ naghị etinye mmelite abalị, ọ na-ajụ m maka "mgbake dakọtara maka nrụnye na-enweghị nchekwa". Kedu ihe m kwesịrị ịme ?? Amachaghị m nke ọma…
Linkon nkịta ọjọọ dijo
Ahụm m, enwere m S4 Mini GT-i9195, enwere m Cyanogenmod 13.0-20160210-NIGHTLY-serranoltexx arụnyere, Android Version 6.0.1 Mashmellow, na mmelite ọhụụ ọ bụla na-ajụ m maka mgbake dakọtara. Kedu nke m na-ebu ODIN, mana ọ ga-apụ n'anya na enweghị m ike imelite belụsọ ma m gbanye ya na PC.
Otu onye ihe a na-eme ya?
Onwere onye maara ihe ga-ekwe omume?
Zaghachi na Linkon Bad Dog
hello, mgbe m chọrọ ibudata na mgbake m ga-esi a posta…. TWRP maka Samsung Galaxy S2 i9100
Samsung si i9100 Galaxy S2 Samsung agaghị enweta nkwado TWRP. I9100 enweghị nkebi bootable mgbake nkebi. Kama nke ahụ, ị ​​rapaara na mgbake dị na ROM gị ma ọ bụ buut image ma ọ bụ kernel. Nwere ike ịchọta TWRP gụnyere na ụfọdụ ROMs, ndụ, ma ọ bụ ihe oyiyi buut, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta OmniROM maka ngwaọrụ gị ...
mmanụ oliv dijo
Ezigbo enyi ụtụtụ, enwere m ọnụ ọnụ ndị China, ụdị ihe atụ Blu bụ Blu Studio otu gbakwunyere, agbalịrị m iwepụ ọdụ ụgbọ ahụ na kingoroot, mana enweghị m ike ịchọta mgbake gbanwere maka ọdụ a, r mediatek MT 6753, ARM cortex a53 processor, 8 etiti,
Zaghachi oswaldo oliveros
Ndewo, amaghị m ma m nwere philz ma ọ bụ cwm, ọ bụ na mgbe m tinyere mgbake enwere m nke a na akụkụ nke na-ekwu ụdị ahụ:
»Philz metụrụ 5
cwm isi version »
ya mere amaghi m nke wunye nwelite ya
Ihe emere mgbe mgbake omenala gi aputaghi ebe obula m no blu studio m hd.
Zaghachi nye mvsame
Etu esi ewepu Samsung Galaxy Note 3 na Android Lollipop
Ncheta Ndagwurugwu: Echefuru echezọ dị na Amazon Appstore